Inani lisusa ikhosi ye-BIM 5D isebenzisa i-Revit, i-Navisworks kunye ne-Dynamo-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ubungakanani bususa ikhosi ye-BIM 5D usebenzisa i-Revit, i-Navisworks kunye ne-Dynamo
Kule khosi siza kugxila ekukhupheni ubuninzi ngokuthe ngqo kwiimodeli zethu ze-BIM. Siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zokukhupha ubungakanani usebenzisa iRevit kunye neNavy. Ukukhutshwa kwezibalo zeetriki ngumsebenzi obalulekileyo oxutywe kwizigaba ezahlukeneyo zeprojekthi kwaye udlala indima ebalulekileyo kuyo yonke imilinganiselo ye-BIM. Ngexesha lale khosi uya kufunda ukuzenzekelayo ukukhutshwa kwamanani ngokuqonda ekudalweni kweetafile. Siza kwazisa iDynamo njengesixhobo esizisebenzelayo ngaphakathi kuVavanyo kwaye sikubonise indlela yokubonakala ngokwakha iinkqubo kwiDynamo.
Ukukhupha ukubala kweetriki ukusuka kwinqanaba loyilo lokuqonda kuyilo oluneenkcukacha.
Ukulawula isiXhobo seShedyuli yokuHlaziya
Sebenzisa iDynamo ukuzenzekelayo ukukhutshwa kobalo beetriki kunye nokuthumela iziphumo.
Qhagamshela uHlaziyo kunye neNavy ukwenza ulawulo oluchanekileyo lokufumana ubuninzi
Kuya kufuneka ukuba ube nesizinda esisisiseko sokuHlaziya
Ufuna inguqulelo yeRevit 2020 okanye ngaphezulu ukuvula iifayile zokuziqhelanisa.
Amagcisa adibeneyo ayile kunye nokwenza imisebenzi